Dhirta basbaaska leh | January 2020
Sida loo abuuro miraha oregano, gaar ahaan beerista dhirta basbaaska
Marka laga soo tago baradhada, basasha iyo yaanyada, sariiraha waddanka waa mid waxtar leh si ay u beertaan geedo iyo caleemo sida oregano (oregano). Intaa waxaa dheer in shaaha delicious iyo suxuunta basbaaska, waxay kaa caawin doontaa inaad ilaaliso beerta ka soo cayayaanka iyo wuxuu noqon doonaa decoration oo qumman. Haddii aad horay uga fekereysay arrintan, hoosta waxaad ka baran doontaa dhammaan qiyaastii oregano, beeraheeda iyo daryeelka.
Oregano ama oregano waa warshad caws oo qallalan ah ilaa 60 cm oo sare, caleen, caleemo dhuuban, timaha waxay ku koraan salka. Oval oo caleemo leh caleemo caan ah ayaa koraan labada lammaan, midba midka kale oo ku yaal gooyn yar. Ubaxyo yaryar oo lakac ah ama midab cad oo ah qaabka gaashaan-baxa leh ee sida gogosha leh. Waxyaabaha kiimikada ah ee oregano waxaa ku jira saliidaha lagama maarmaanka ah, fitamiinada C iyo B6, antioxidants iyo fareeshka, taas oo ay ugu wacan tahay dhirta ay leedahay caraf cad oo quruxda leh.
Sida loo koro abuurka duurjoogta laga bilaabo beeridda iyo daryeelka guriga
Inta badan, jecel yihiin dhir udgoon ayaa isku khilaafsan dhirta iyo geedaha bakaylaha. Ku gardarrada jahwareerka la mid ah codka magacyada dhirta. Laakiin labadaba bakteeriyada iyo kiriimka labadaba waxay si fiican u dagaan meel ay ku yaallaan dhadhanka dhirta. Waxaa jira in ka badan soddon nooc oo chabra ah adduunka. Warshadu waxay caan ku tahay carafka basbaaska leh ee caleemaha, oo ay ku jiraan waxyaabo badan oo saliid ah oo muhiim ah.
Cilantro ama mashiinka loo yaqaan 'Cilantro' waa mid aad u dheer oo loo yaqaan 'spice', oo ay si gaar ah u jecel yihiin dadka deggan wadamada bariga ah kuwaas oo ku koray sanado badan. Waxaa loo isticmaalaa sida basbaaska cuntooyinka kala duwan: hilibka, qudaarta, suugada, iyo sidoo kale caanaha, saladhaha. Nidaamka dhirtu wuxuu leeyahay caraf udgoon oo macaan leh oo aan lagu wareeri karin wax kasta.
Qaababka dhir beertay xilliga qaboobaha
Parsley waa warshad biennial ah oo ka mid ah caleenta Parsley ka soo qoyska Umbrella leh stem upright jilicsan iyo dhaldhalaalaan, cagaaran madow, caleemaha Pinnate. Waxay ka kooban tahay ascorbic acid, fitamiin B, retinol, riboflavin, birta, potassium, magnesium, walxaha pectin iyo phytoncides. Waxaa si weyn loo isticmaalaa qaab cusub oo qallalan oo lagu kariyo karinta iyo ilaalinta, waxaa lagu daraa suxuunta laga keeno khudaarta, hilibka, kalluunka la kariyey, iyo ciyaarta.
Sidee marjoram waa faa'iido leh: sifooyinka wanaagsan iyo qaababka daawada ee cawska
Cagaarka, boomaatada, shaaha, saliidda - taas oo aan kaliya laga sameyn marjoram. Bariisku waa mid caan ku ah aduunka oo idil, cakirnaanta qoyseedkuna ma tagi doono. Waxay bilaabeen inay isticmaalaan tobanaan qarniyaal ka hor. Waxaa intaa dheer, tirada codsiyada sida ay ahayd, oo weli aad u weyn. Ilaa iyo hada, marjoram waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cuduro badan, sidoo kale wuxuu ka helay codsigiisa cosmetology iyo tilmaamo kale.
Qalabka waxtarka leh iyo isticmaalka saffron (daroogada) ee daawada dabiiciga ah
Dad badan ayaa maqlay maqaarka cagaarka, laakiin cid kastaa fursad uma siin inay tijaabiso - waxay ku dhibeysaa qiimaha qaniinyada. Waa tufaaxa taas oo si sax ah loo tixgelinayo ugu qaalisan adduunka, kaas oo la xaqiijiyay xitaa marka la galo ee ku jira galka Guinness Records. Kharashka ka baxa ee saffron waxaa lagu sharaxay tiknoolaji wax soo saar badan oo farsamo: waxaa lagama maarmaan ah in la qaado manhajka, iyo soosaarka ka yimid alaabta ceeriinku waa mid aad u yar (10 kg halkii 1 ha).
Goobidda iyo daryeellidda dill ee daaqadaha, sida loo abuuro cadaan udgoon oo dheriga ah
Kobcin cagaarka guriga waa mid xiiso iyo faa'iido leh. Waad ku kori kartaa geedo daaqsiin ah oo ku yaala windowsill-gaaga. Xitaa dheriga fudud ama sanduuq leh caleemo dhadhan fiican leh oo ku yaal windowsilladaada ayaa noqon doona bilow wanaagsan. Dill, oo la koray gacmihiisa, waa damaanad qaadashada maqnaanshaha walxo waxyeelo leh cagaarka. Sida loo abuuro dill laga bilaabo miraha daaqadahaaga, waxaana lagaga doodi doonaa maqaalkan.
Talyaanigu ma metelaan cuntooyinkooda iyaga oo aan lahayn arugula, annaga oo kaliya ayaa dhawaan uun soo baxday oo cagaaran oo qaali ah. Maanta waxaad ka iibsan kartaa dukaanka, waxayna noqoneysaa mid caan ah. Arugula oo salad ah oo saliideed leh oo salad ah ayaa hadda lagu kori karaa iyada oo aan dhibaato lahayn daaqadaha guriga dhexdiisa.
Isticmaalka arugula: faa'iidooyinka iyo waxyeellada
Arugula (Eruka, Indau) ayaa ka muuqday miiskeenii dhawaan, laakiin hubaal waxay dhab ahaan u qaadataa booskeeda waxayna noqotaa mid caan ah. Soo saarida sawirada macaan ee talyaaniga iyo cuntooyinka Mediterranean, dad badani xitaa ma ogaaan waxa faa'iido u leh cagaarka cajiibka ah. Ku saabsan arugula guud, faa'iidooyinka iyo waxyeelada isticmaalka, waxaan ka wada hadli doonaa maqaalkan.
Cagaarka la qalajiyo xilliga jiilaalka: siyaabaha ugu fiican
Dhibaato qofku maanta malaynayo cunto karis la'aan iyada oo aan la isticmaalin cagaarka. Ka sokow xaqiiqda ah in ay tahay dhadhan dhadhan leh oo udgoon ee suxuunta kala duwan, sidoo kale waa kaydka nafaqooyinka. Sidaa darteed, tusaale ahaan, dhir wuxuu ka kooban yahay afar jeer ascorbic acid ka badan liin. Iyo 100 g ee isbinaajka waxaa jira 25% oo bir ah laga bilaabo caadada maalinlaha ah ee lagama maarmaanka u ah qofka.
Cabbitaanka cagaarka jiilaalka: cuntada ugu fiican
Barafku waa hab fiican oo lagu keydiyo cuntada xilliga jiilaalka. Guryaha ayaa la isticmaalay si ay u qaboojiyaan khudradda, miraha, berry, caleenta, cagaarka. Tani waxay suurtogal u tahay in ay jidhka ku quudiso fiitamiinno muhiim ah iyo walxo kale oo faa'iido leh xilliga jiilaalka, marka ay adag tahay in la helo khudradda iyo miraha cusub.
Guryaha waxtarka leh iyo waxyeeleynta cassia (qorfe Shiinaha)
Ka wakiilashada cambe ama tufaax, badanaa waxay dareemaan urta macmacaan cusub iyo ... urta qorfe. Mucaawadani waxay si niyad leh u deggantahay doorashooyinkeenna dhadhanka waxayna noqotaa mid caan ah. Cunto yar oo loo yaqaan 'Chine Cheese', ayaa, si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, horeyba si adag ayaa ujiray suuqa gudaha, laakiin weli maaha meel aad u qadarin macaamiisha, sidaas darteed waxaa jira muran badan oo ku hareeraysan.
Shaaha ka samee liin macaan: waxa faa'iido leh, sida diyaargarow iyo cabitaan, waxa lagu dari karo, yaanay awoodin
Melissa (Gacmaha Lemon) ayaa caan ku ah hannaanka bogsiinta, kuwaas oo la ogaaday xilligii hore. Haddii aad waligeed ku neefsatay caraf udgoon, waxaad u maleyneysaa inaadan isku dhex dareynin isku dar ah oo isku mid ah oo ah midab iyo liin leh wax kasta oo kale. Nooca ugu fudud, fudud iyo habka caadiga ah ee melissa waa shaaha.
Qoraalka: maxaa faa'iido leh, maxaa caawinaysa, meesha lagu daro, sida loo dalbado
Dad badan oo reer yurubiyiin ah ayaa ku jira qoraaga oo leh dabiici udgoon oo udub dhexaad ah oo lagu daro keega iyo salad miro iyo qudaar. Laakiin dhaqanka adduunka, isticmaalka dhirta kuma koobna. In qolalka quruumaha kala duwan, waxaa lagu daraa hilibka, kalluunka asaliga ah, cunto yari, koorsooyinka koowaad, macmacaanka, pickles kala duwan, marinades.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhirta basbaaska leh 2020